Fahadisoana iraisana 7 ao amin'ny lalàna Arbitration UAE | Mpisolovava arbitration UAE
Fahadisoana iraisana 7 ao amin'ny lalàna Arbitration UAE
Orinasa mpampanoa lalàna tsara indrindra any Dubai
Lalànan'ny Arbitration any UAE
Ny fitomboana sy ny fanatontoloana ny asa-tany sy ny varotra any UAE dia nametraka azy io ho toy ny teboka iraisan'ny orinasa, mpampiasa vola ary ny tombontsoan'ny governemanta. Tsy azo ihodivirana fa ny sasany amin'ireto fifandraisana ireto dia rava, ary ny antoko dia mijery ny fomba tsara indrindra hamahana ny fifanolanana. Amin'ny tranga maro dia arbitration izany.
Ny rafitra ara-dalàna sy arbitral an'ny UAE dia ekena fa tsy manam-paharoa sy sarotra, miaraka amin'ny morontsiraka sy ny any ivelany, ny lalàna sivily ary ny lalàna iraisana, ary ny fizotrany amin'ny teny anglisy sy arabo.
Ho an'ireo antoko mikasa ny hamaha ny fifanolanana amin'ny alàlan'ny safidin'ny UAE arbitral, ny safidin'ny safidy sy ny eritreritra hatao dia mety goavana. Raha manome karazana safidy sy safidy marobe izy io, dia saika manome toky ihany koa ny mety ho fahadisoana.
Ny antony dia tsy hoe matetika ny antoko no maika hamakivaky io fizotran-javatra io miaraka amin'ny tsy fananana faharetana izay niteraka fifanolanana tamin'ny voalohany. Ny lesoka dia mety hitranga amin'ireo dingana sy singa rehetra mandrafitra ny fizotry ny Arbitral, avy amin'ny fangatahan'ny Mpangataka arbitration, fihainoana momba ny fomba fiasa, fanambarana, fanambarana ny vavolombelona, ​​fihainoana ary ny loka farany.
Ny dingana tsirairay amin'ny fizarazarana dia misy fandrika iraisana izay mamandrika olona maro niharam-boina, ka izany no mahatonga ny sangan'asa toa izany tsy ho ampy. Na eo aza izany dia manasongadina (tsy amina filaharana manokana) ny sasany amin'ireo lesoka mahazatra natao tao amin'ireo fehintsoratra etsy ambany izahay; ary manomeza dingana azo ampiharina amin'ny fomba hisorohana azy ireo.
Fahadisoana iraisana amin'ny Arbitration UAE
Zahao ireo lesoka mahazatra etsy ambany amin'ny fizotran'ny fifampiraharahana mahomby, manomboka amin'ny fandrafetana fifanarahana arbitration, fahefana, loka arbitration, ary fampiharana.
1. Fanomezana fahefana hanaiky ny Arbitration
Ny lalàna UAE dia mamaritra araka ny fomban-drazana fa ny talen-tsekoly dia tsy maintsy manome fahefana manokana ho an'ny masoivoho iray alohan'ny hametrahan'ilay mpiasan-draharaha ara-dalàna ny talen'ny fifampiraharahana. Ny lalàna dia mitaky talen-tseky hanambara mazava ao amin'ny fifanarahana maso ivoho fa manana fahefana ny hanao fifanarahana arbitration ho azy ireo ny maso ivoho.
Raha tsy izany, misy ny tena loza mety hitranga ary tsy azo ampiharina ny fifanarahana arbitration amin'ny fifanarahana. Tsy maninona izay tompon'andraikitra dia manana fahefana hanasonia ny fifanarahana amin'ny anaran'ny talen-tsekoly (fa tsy ny marimaritra iraisana ao anaty). Ny lalàna Arbitration dia manondro bebe kokoa azy io ho toy ny antony hanoherana ny loka arbitral. Matetika ireo orinasa iraisam-pirenena sy isam-paritra dia manao tsinontsinona ireo fepetra takiana amin'ny fomba ofisialy izay miteraka voka-dratsy.
2. Fanamafisana ny fepetran'ny Arbitration
Ny fifandraisana akaiky eo amin'ny fizotry ny arbitration sy ny andininy arbitration amin'ny fifanarahana dia mahatonga azy io ho raharaha sarotra be. Ny lesoka kely amin'ny fandrafetana dia mety hitarika amin'ny fandaniam-bola tsy ilaina sy ny fanemorana na koa ny ady amin'ny fitsarana amin'ny fisian'ny fifanarahana handikana ny andininy toy izany. Ny sasany amin'ireo lesoka iraisana miaraka amin'ny andininy dia misy;
Manome fe-potoana fohy tsy misy antony ho an'ny tribonaly,
Manome anarana andrim-panjakana na arbitrator hanao zavatra tsy misy na diso anarana na tsy mety mihetsika,
Famolavolana andalana tsy feno,
Mametraka fetra tsy nahy eo amin'ny sahan'ny andalana, et cetera.
Ny fifampiraharahana dia resaka fifanarahana, ary misy lahatsoratra amin'ny an-tsipiriany azon'ny olona dinihina amin'ny famolavolana ny andininy arbitration. Andininy maodely arbitration marobe nambaran'ny ICC, LCIA, ICDR UNCITRAL, ary DIAC azo ampiasaina. Niniana namboarina tamin'ny endrika fanabeazana fototra (mba hikarakarana toe-javatra isan-karazany) izy ireo ary tokony hampiasaina amin'izany endrika izany nefa tsy hamerina azy ireo intsony.
3. Fampiasana amin'ny fomba diso ny fandinihan'ny Vavolombelona
Matetika izany dia mitranga rehefa manandrana sy mampiasa famotopotorana ny mpisolovava mba hanaporofoana fa lohalaharana ny raharahan'izy ireo na tsy mikasa ny hanao famotopotorana alohan'ny fihainoana. Ny fanaovana dinidinika dia iray amin'ireo fitaovana matanjaka indrindra omena torohevitra mandritra ny fotoam-pitsarana, nefa mpisolovava:
mametraha fanontaniana mivelatra amin'ny famotopotorana, ahafahan'ny vavolombelona ratsy milaza "ny azy" amin'ny tantara,
manadihady mba hanaporofoana fa tompon'andraikitra ambony izy ireo,
mandany fotoana amin'ny famotopotorana marimaritra iraisana ary manahirana mafy ny isan'ny teboka amin'ny fanadinana mivantana ataon'ny vavolombelona, ​​indrindra ireo olana tsy manandanja.
Ny torohevitra azo ampiharina indrindra eto dia ny fanomanana tsara ny raharaha. Fantaro izay tianao ho azo avy amin'ilay vavolombelona, ​​manaova lisitra fohy ary mifikitra aminy. Raha tsy amin'ny tranga tsy mahazatra dia mba tohero ny fakam-panahy handrehitra ny vavolombelona mandritra ny ora maro amin'ny zavatra rehetra nolazainy.
4. Mandany fotoana handresen-dahatra ny Arbitrateur/tribunal
Ireo izay manao an'ity lesoka ity amin'ny ankapobeny dia manao izany amin'ny fiheverana fa mizara ny fahalalany ny raharaha ny mpitsara; tsy nahavita nandinika sy nandamina ny raharahan'izy ireo; ary mametraka rakitra fohy tsy maharesy lahatra.
Ny famintinana dia tokony ho mahitsy sy fohy araka izay azo atao. Na dia tsy mametraka fetran'ny pejy amin'ny torolàlana aza ny mpitsara dia tsara kokoa ny mampiasa fetra federaly, fanjakana, na eo an-toerana ho toy ny torolàlana. Ary koa, miezaha hihaino fohy fa fohy noho ny pejy 30.
5. Lalao tsy ilaina
Raha toa ny arbitration sasany dia mety mitaky kapila macho mitovy amin'ny fitoriana, ny mpisolovava sasany dia mampiasa tetika mafy, fanararaotana ary fanemorana matetika loatra ka manimba azy ireo. Ireto mpisolovava ireto amin'ny ankapobeny:
Mandà tsy hiara-miasa amin'ny lafiny rehetra,
Tanjona amin'ny saika ny fampirantiana rehetra atolotra amin'ny fihainoana etsy ankilany,
Fampirantiana «tampoka» tampoka tamin'ny fihainoana,
Fandaharam-potoana ny fametrahana vola mitokana.
Ny fizarazarana, toy ny fitsarana, dia fizotran'ny fahavalo; na izany aza, tsy fahazoan-dàlana tsy hiraharaha ny maha-matihanina sy ny fahalalam-pomba hanohana ny fitempon'ny tratra sy ny tsy firaisan-kina. Ny tsara indrindra dia ny manomana ny zavatra hitanao ary manome sosokevitra momba ny fahitana samy hafa izay mifanaraka amin'ny filan'ny antoko sy ny raharaha.
6. Mihevitra ny fitsipiky ny porofo ho mitovy amin'ny an'ny fitsarana
Mampalahelo fa mahazatra loatra ny tsy fanokanan'ny mpisolovava fotoana hanatanterahana ny fitsipiky ny porofo; ary manao fanoherana porofo tsy mandaitra. Amin'ny ankapobeny, ny lalàna porofo mihatra amin'ny raharaham-pitsarana dia tsy mamatotra ny fihainoana Arbitration. Ny torohevitra dia tokony hahafantatra izay fitsipika misy ary mihetsika mifanaraka amin'izany.
7. Ny tsy fanatanterahana ny fahazotoana ara-drariny amin'ny Arbitrator
Ny tsara indrindra dia ny fahalalana ny momba ny matihanina sy ny tantaram-piainan'ny arbitratoranao; fantaro ireo singa amin'ny porofo ilaina, ary omano arak'izay ny raharaha. Mandrosoa amin'ny safidinao raha afa-po ianao fa ny arbitrator dia manam-pahaizana amin'ny indostrian'ny mpanjifanao na ny olana ara-dalàna manokana atolotry ny raharaha anao. Ilaina ihany koa ny maha olona manan-tsaina azy izay matetika "nanandrana" tranga teo aloha, raha tsy mpanelanelana dia mpanolotsaina.
Mitadiava torohevitra momba ny manam-pahaizana avy amin'ny matihanina momba ny fizarazaran-tena efa za-draharaha
Betsaka ny hevi-diso amin'ny fomba fiasan'ny arbitration sy izay antenaina amin'ny antoko. Ny arbitration dia dingana ara-dalàna izay natao hanolo ny raharaham-pitsarana. Ny fizotry ny fitsaratsaram-pahefana amin'ny faritra rehetra dia sarotra ka mitaky fiheverana mendrika amin'ny lafiny rehetra sy ny dingana amin'ny arbitration, na ara-dalàna na tsy ara-dalàna. Matetika, ny fiheverana amin'ny antsipiriany dia fiheverana tsy manam-pahaizana manokana amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny lalàna.
Ny lalàna mifehy ny arbitration dia ampahany tena lehibe amin'ny raharaham-barotra na fiainana ara-barotra, indrindra ao amin'ny UAE. Ny asan'ny arbitrator dia zava-dehibe amin'ny fandehanan'ny asa aman-draharaha, indrindra rehefa misy ny olana ara-barotra. Mizaha ny safidinao ara-dalàna ary avy eo ampiasao ny serivisin'i Amal Khamis Advocates hiresahana ny fifanolanana mety hanananao amin'ny antoko hafa.
Amal Khamis Advocates dia orinasan-dalàm-panjakana manan-talenta manokana amin'ny fanavakavahana, fanelanelanana ary fomba hafa hamahana ny olana any Dubai, UAE. Manana mpisolovava sy mpisolovava za-draharaha be any UAE izahay. Mifandraisa aminay anio!